२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ११:२७
फागुन २१, विराटनगर –
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) बीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र छलफल पछि आइतबार विश्वविद्यालय र अनेरास्ववियू बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
विश्वविद्यालयको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. पवन कुमार झा र अनेरास्ववियूको तर्फबाट पुर्वी जिल्ला कमिटीका संयोजक भूषण पोमु र सह संयोजक अमर मण्डलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति पत्रमा मौका परीक्षा , छात्रवृत्ति र स्ववियू लगायतको विषय समेटिएको छ ।
मौका परिक्षाका सम्बन्धमा, खस्किदै गएको परिक्षाफल सुधारका निम्ती र गोल्डेन मौकाका सम्बन्धनमा प्राज्ञिक परिषदमा छलफल गरी सोही बमोजिम गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा स्ववियु स्थापनाका लागि पनि पहल गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै आरक्षण कोटाबाट प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति नखोसिने पनि सहमति भएको छ।
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यलय गोठगाउँमा भएको छलफलमा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. यादव राज कोईराला र अनेरास्ववियू केन्द्रिय सदस्य बालकुमार केसीको समेत उपस्थिति थियो ।